PELARGONIUM MILDFIELD ROSE: SAWIR IYO SHARAX, TAARIIKHDA MUUQAALKA GEEDKA, BEERASHADA, BEERASHADA IYO DARYEELKA, IYO SIDOO KALE DHALMO, CAYAYAANKA IYO CUDURRADA - SOOSAARKA DALAGGA
Qurxinta gurigaaga - Pelargonium Mildfield Rose: sharaxaad la leh sawir, beerid, dhalmo iyo daryeel
Ka mid ah ubaxyada ku koray Russia, Pelargonium Milfield Rose waa jacayl gaar ah iyo caan u ah beerta.
Tan waxaa keena ubaxyada quruxda badan ee warshadda iyo sahlanaanta daryeelka. Maqaalka ayaa tixgelin doona sifooyinka botanical, taariikhda dhacdo, iyo sidoo kale sharaxaadda muuqaalka.
Waxaynu baraneynaa sida si habboon loo daryeelo milixda milixda ee kor u kaca, iyo sidoo kale sahaminta sifooyinka wax soo saarka.
Sifooyinka Botanical, taariikhda iyo qiimaha
Pelargonium (Laatiin Pelargōnium) waa caleemaha dhirta jinsiga qoyska. Tani waa mid ka mid ah dhirta ugu jecel iyo faafa. Nasiib darro, mararka qaar waxaa si qalad ah loo yaqaan 'geraniums'. Wakiilo ka socda jasiiradda xilligan, ubaxku waa gebi ahaanba sax ah (oo leh jilaabooyin dhowr ah oo isku eg), pelargonium, ubaxyadu waa laba-dhinac oo isku-dhafan (waxay leeyihiin hal diyaarsan oo simetry ah).
Dabeecadda, pelargonium waxaa loo qaybiyaa Koonfur Afrika, kala duwanaanshada noolaha waa qiyaastii 350 nooc.
Wakiil caan ah oo ka mid ah cirfadani waa caanaha milixda. Waxay ka tirsan tahay kooxda "Ivy-hybrids" Warshadani waxay ka kooban tahay isku-dhafan oo loo yaqaan 'zonal' iyo 'myum pelargonium'. Jajabkani waxa uu leeyahay calaamado ah labada caleemo ah iyo zonal pelargonium, taas oo muuqata qaabka caleemaha iyo nooca koritaanka caleemaha.
Caawimaad! Celcelis ahaan, qiimaha geedka waa 350 RUB.
Ubaxyada pelargonium waxay aad u la mid yihiin dhalashada dhabta ah.
Warshadu waxay leedahay qaab shisheeye.
Duufaan xoog leh oo culus ayaa ka kooban ubaxyo casaan ah oo labajibaaran.
Jasiiradda oo la daboolay, oo lagu daboolay tiro badan oo caleemo ah.
Marka la eego xaaladaha iftiinka wanaagsan, zonality waa la ogaan karaa taarikada caleenka.
Miro waa sanduuq leh sepals la ilaaliyo.
Halkan waxaad ka arki kartaa sawirrada Pelargonium Mildfield Rose:
Soo saarista: xeerarka iyo talooyinka
Marka koray ee xaaladaha ee dhexe ee Russia, dhirta waxaa lagu beeray dhulka u furan horraantii bilowga June. Ka hor inta beerto, pelargonium ayaa si fiican u qoyan.
Marka sii kordhaya beerta ubax, ma aha mid ku haboon dhirta la beeray. Tirada ugu wanaagsan ee dhirta waa 12 gaas oo mitir labajibbaaran. Inta lagu jiro labada toddobaad ee ugu horreeya ka dib markii la beero, pelargonium waa in la waraabiyo si joogto ah, si ay u xidid dhirta ka fiican.
Marka beeritaanka pelargonium dhulka u furan yahay doorbideyso sariiro kor loo qaaday ama xayeysiis.
Iftiimintu waxay door ka ciyaartaa door muhiim ah beerista milixda milixda. Warshadu waxay u baahan tahay qadar xaq ah oo iftiinka ah. koritaanka caadiga ah iyo ubax.
Iyadoo la'aanta iftiinka, koritaanka pelargonium waxay hoos u dhigi kartaa ama joojin kartaa wadajir ahaan. Nalalka iftiinka qorraxda ayaa keenaya daciifinta dhirta, taas oo keeneysa in ay u nugul yihiin cudurada iyo cayayaanka kala duwan. Warshadu waa inay ahaataa meel fiican oo iftiin leh. Xilliyada xagaaga ee aadka u kulul waxaa suuragal ah in la gooyo geedka qorraxda tooska ah.
Xilliga qaboobaha, isticmaalka nalalka dheeriga ah ayaa lagula talinayaa, kaas oo xaqiijin doona ubax sanadka oo dhan (marka lagu hayo xaalad diiran). Si aad u abuurto taaj midaysan oo aad u horumarsan, waxaad u baahan tahay inaad dhajiso dhirta dhirta 90 darajo maalin kasta.
Wixii kobcin wanaagsan iyo horumarin buuxda ee pelargonium, milfield wuu kacay waxay u baahan yihiin ciidda dabacsan, nafaqo leh oo si fiican u qoyan. Waxaad u iibsan kartaa ciidda diyaarka ah ee loogu talagalay daawada pelargonium, waxaad sidoo kale diyaarin kartaa ciidda adigaa. Qeybta hoose ee dheriga ubaxa waa qasab in ay ku dhejiyaan lakabka ah dheecaan - dhoobo ballaariyey.
Halabuurka ciidda ee beerista ee Pelargonium Millfield ayaa kacay:
laba xabbadood oo carrada qalalan;
laba qaybood oo ah peat;
laba qaybood oo ah humus;
hal xabbo oo sanduuq aan qalafsaneyn.
Marka la isticmaalayo qaybaha substrate ee laga qaaday wadada, waa in la nadiifiyo iyaga.maadaama ay ku dhici karaan cayayaanka iyo fangaska.
Digniin! Pelargonium uma dulqaadanayo boodhka iyo joojinta qoyaan ee ciidda. Tani waxay horseedi kartaa burbur iyo dhimasho geedka.
Noocaan pelargonium wuxuu u baahan yahay in la koro heerkulka caadiga ah. Xaaladaha ugu wanaagsan waxay noqon doonaan beeritaanka qolka:
xilliga xagaaga, heerkulka ka +20 ilaa +25 digrii;
xilliga qaboobaha + 12-15 digrii.
Iyada oo ku jira qallalan jiilaalka xilliga qaboobaha, waxay u adkeystaan ​​dhibco heerkul ah illaa + 8 ° S. Milkiilaha Pelargonium wuxuu u kicinayaa inaanu u dulqaadan heerkulka cimilada oo dhan.
Xilliga xagaaga, guriga, ciidda waa in la qallajiyaa 3-4 cisho ka dib marka qalalan la qalajiyey. Waxaad ku hubin kartaa adigoo qufacaya 1-2 cm gudaha substrate.
Xilliga jiilaalka, waraabinta waxaa loo sameeyaa qaab sidan oo kale dhulka aan si fudud u engegin. Marka qulqulaya ciidda heerkul hooseeyo, xajmiga degdegga ah ee nidaamka xididka dhirta waa suurtagal.
Pelargonium waxay u dulqaadataa hawada qalalanSidaa darteed lagama maarmaan in la buufiyo.
Dharka ugu sareeya waxaa lagu fuliyaa ujeedada ah in lagu hagaajiyo ubax, loogu talagalay ujeeddada this Bacriminta fosfate waxaa loo isticmaalaa. Bacriminta leh Bacriminta dabiiciga ah waa wax aan loo baahnayn sababtoo ah warshadu ma si fiican u nuugin.
Xaaladaha qolka, Saliidda Pelargonium waxay kacday sanad walba, iyada oo caleemaha la socoto oo kaliya 2-4 noodes. Tan waxaa loo sameeyaa si aad u hesho geedo ubax ah. Dhirta ayaa u baahan in laga saaro caleemaha la qalajiyey iyo lafdhabarta.
Jarida iyo saarista caleemaha waxaa lagu sameeyaa kaliya mindi aad u fiiqan., oo macnaheedu maaha inuu jeexo caleemaha, sababtoo ah geesaha jeexjeexa ayaa laga yaabaa inay bilaabaan kallana. Ujeedada loo isticmaalo jeermi-dilista, goobta la gooyey waxaa lagu daaweeyaa dhuxul la jajabiyey.
Gooyaa waxaa loo sameeyaa si salka u ah asliga ah ee ka tagay on geedka. Haddii waqti aanad xirin caleemaha ubaxyada ah iyo in aan la samaynin warshad, waxay si dhakhso ah u noqonaysaa dameer.
Cayayaanka ugu muhiimsan waa:
Cayayaankaasi waxay si guul leh u burburiyaan cayayaanka. Iyadoo la xakameynayo cayayaanka waqtigeeda, waxaa suurtogal ah in lagu ilaaliyo dhirta iyaga oo aan waxyeello u geysan.
Daryeelka aan habooneyn, pelargonium ayaa waxyeello u geysan kara caaryada cawska iyo miraha. Si loola dagaalamo waxaa jira noocyo badan oo fungicides ah.
Fmilkiilaha miyir-beeleedku wuxuu ka hadlayaa noocyada aagga, inkasta oo ay tahay hybrid, sidaa daraadeed waxaa suurtagal ah in leydiiyo jarista iyo abuurista labadaba.
Bannaanka u Most beeray guntooda Pelargonium xaq jiilaalka, ujeedada this waxay u beeraan gooyn ah ee warshadda ee ciid ama perlite iyo qoyaan. Gooynimada jarjarida ee la sameeyo unugyada boqoradda, jiilaalka heerkul aan ka sareeynin + 12 ° C.
Gooyn Pelargonium oo laga soo bilaabo Jannaayo at + 16 ° C, xitaa heerkulka ambaakan, xididdada geedka bilaabaan inay sameeyaan. Ka dibna heerkulka hawada ee qolka waxaa loo kiciyaa + 20 ° C. In guntooda, sameynta nidaamka xididka ka dib 3 toddobaad ka dib. Ka dib markii la sameeyo nidaamka xididka, dhirta waxaa loo wareejiyaa dheriyo.
Beeridda abuurka laga soo bilaabo December ilaa February. Tani, ciidda waa inay ka kooban yihiin ciid adag iyo peat ama peat. Calaamaduhu waxay u muuqdaan 3 asbuuc kadib. Waqtigaa, ciidda waa in si joogto ah loo waraabiyaa. Ka dabool weelka leh substrate waa in lagu daboolaa filim.
Ka dib markii caleemaha ay gaareen marxaladda saddex caleemo run ah, waxay u baahan yihiin in lagu dhufto dheriyo gooni ah. Si aad u sameyso warshad bushan leh waxay u baahan tahay in la xoqo xaashida 6aad.
Waa maxay noocyo kale oo xiiso leh oo caan ah ee pelargonium? Akhri Abriil Baraf, Koonfurta, Red Pandora, Stellar, Pink, Denise, Lady Gertrude, Anita, Prince Gustav, Grandiflora.
Iyadoo loo hoggaansanaayo waxqabadyada beeraha iyo kartida daryeelka caafimaadka Pelargonium Milfield Rose waxay ku farxi doontaa ubax waxayna noqotaa quruxda dhabta ah ee gurigaaga. Warshadani uma baahna daryeel gaar ah, laakiin hirgelinta xeerarka aasaasiga ah waa qasab in ay sii kordhaan dhirta quruxda badan iyo kuwa caafimaadka leh.